Biyaha Laascaanood in shirkad ganacsi lagu wareejiyo ba’ hor leh, mise badhaadhe? | Welcome to Lafweyne.com|
Biyaha Laascaanood in shirkad ganacsi lagu wareejiyo ba’ hor leh, mise badhaadhe?
May 12, 2017 - Comments off
Biyuhu waa waa adeeg daruuri u ah jiritaanka nolosha, waa adeeg ay tahay in nooluhu uu xaq uu leeyahay inuu helo si uu u noolaado. Waxa nasiib darro ah in laga dhigo badeecad suuqa lagu kala iibsado (commodity), khaasatan waddamada fakhriga ah ee dadka badankiisu aanay awoodi karin inay iibsadaan. Bulshadii aan ka haqab beelin biyaha waxay ka go’an tahay noloshooda, hadday tahay xag caafimaad, xag waxbarasho, xag wax soo saar iyo xag koboc dhaqaaleba.
Magaalada Laascaanood ayaa dhibaatooyinka haysta ee ay intay jirtay la daalaa dhacaysey waxa ka mid ah baahida biyo ku filan oo nadiif ah. Adeegga biyaha Laascaanood wuxuu markii ugu horreysey ku xidhnaa in laga soo dhaansado durdurka Laascaanood, waxaa xigtay in ceelkii Cali Barre, waxaa iyana xigtey Ceelkii Goojacadde. Dhammaan ilahan biyaha ee kala danbeeyey may ahayn ilo biyo nadiif ah, mana ahayn kuwo dabooli karayey baahida dadka magaalada oo marba marka ka danbaysa sii kordheysey. Marna ma aanay suurto gelin in biyo gelin dhammaystiran oo qasabado ah la gaadhsiiyo guri walba.
Haddaba tan iyo intii maamulka Somaliland la wareegay gacan ku haynta magaalada Laascaanood waxa jirtey inay dadka dhegahooda ay ka badatay qorsheyaal maamulkaasi wadey oo ku aaddan sidii magaalada Laascaanood biyo ku filan oo nadiif ah loogu heli lahaa. Ugu danbayn sannadkii 2015 ayay Wasaaradda Biyaha ee Somaliland la yimaaddeen qorshe ay sheegeen inay rabaan in lagu fulinayo sidii dhibaatada biya la’aanta loo soo afjari lahaa. Qorshahan iyo mid kaloo Berbera ahaa waxaa dhaqaalihiisa badidiisa ballan qaaday Sanduuqa Horumarinta Somaliland (Somaliland Development Fund SDF.) Lacagtaasi ogaalkayga waa la qoondeeyey khasnad gaarana waa lagu shubay waxaana lagu daray qorshe sannadeedka iyo qorshaha horumarinta shanta sannadood ee Somaliland.
Somaliland minister of water resources launches SDF funded comprehensive water study and borehole drilling project in Lasanod
Haddaba waxaa isweydiin leh dhowr su’aalood; 1) Dhaqaalihii loo qoondeeyey biyaha Laascaanood xaggee ku danbeeyey? 2) Maxaa keenay in sannadkan 2017 qorshihii biyo soo saaridda iyo biyogelinta Laascaanood lagu wareejiyo shirkad ganacsi? 3) Dadka reer Laascaanood ee saboolka u badan dani ma ugu jirtaa biyo cid gaar u leedahay oo laga ganacsanayo, mase awoodi karayaan inay iibsadaan?
Su’aasha koowaad anigu wax jawaab ah uma hayo. Haddaan qiyaaso aragtidayda su’aasha labaad, waxay ila tahay in ganacsatadu ay arkeen fursad ganacsi oo macaash weyn laga heli karo inay ka bannaan tahay Laascaanood taasoo ah inay la wareegaan adeegga biyaha ee Laascaanood. Su’aasha saddexaad ee ah dadka saboolka ah dani ma ugu jirtaa, waxay ila tahay inay adag tahay inay awoodaan dadkaa danyarta ahi inay iibsadaan biyaha. Weliba dadka ugu liita dhaqaale ahaan ayay arrintani culays dheeraada ku sii noqonaysaa. Arrinta kale ee ganacsiyaynta biyuhu (commodification of water) iyo gaar u yeelashada biyuba (privatisation of water) iyo ku keli ahaanshaha shirkad qudh ihi (monopolisation) waxay soo kordhinaysaa in shirkaddaasi ganacsi ee aan cid kale la tartamayni ay; a) qiimahay doonto biyaha ku iibiso b) Noocii ay doonto oo biyo ah ay soo saarto. Waxaan nooca uga jeedaa tayada (quality) biyaha ee keligood baa suuqa haystee. c) Maaddaama ay macaash doon yihiin ay soo saaraan baaxadday doonaan oo biyo ah iyagoo aan u eegayn mustaqbalka fog iyo saamaynta ay ku yelan doonaan jiilasha danbe (quantity of production).
Intan oo dhan waxaa sii dheer haddii ay biyo soo saaraan qoladan macaash doonka ihi waxa meesha ka imaanaysa inay is hortaagaan cid alla iyo ciddii hammi ka galo inay biyo bilaasha ah ka soo saaraan degaanka Laascaanood ama hay’ado dawliya ha ahaadeen ama hay’adaha aan dawliga ahayn ee wax caawiyaba ha ahaadeene. Taasi waxay keeni karaysaa in qoladan macaash doonka ahi ay sabab u noqdaan inay shacabka masaakiinta ah ay iska hortaagaan inay helaan adeeg biyood oo bilaash ah (free water service provisions). Waxaa kaloo u baahan in la is weydiiyo haddii biyaha degaanka Laascaanood ay isugu soo ururaan amaba isha ugu muhiimsani noqoto meel keliya, si kale haddaan u idhaahdo haddii biyuhu goob keliya isugu soo ururaan oo ay noqoto “meesha keliya ee awoodi karta in laga helo biyo haqab tiri kara dadka iyo duunyada degaanka” meeshaasna ay qoladan macaashdoonka ahi “ku habsato” oo mulkido!
Waxaan kusoo afmeerayaa in dadaka reer Laascaanood iyo maamulka Somaliland ee hadda gacanta ku haya Laascaanoodba ay arrinkaa dib uga fiirsadaan oo dood shacab laga furo oo la is barbardhigo khasaaraha iyo faa’iidada ugu jirta bilshoweynta (cost benifit analysis). Dadka reer Laascaanood waa inay is abaabulaan oo dood shacab ka furaan maamulka ay hoosjoogaanna ay culays ku saaraan sidii arrintan wareejinta ah (privatisation) dib looga noqon lahaa. Dadku iyagaa xaq uleh inay ka doodaan arrinkan oo taladooda ka dhiibtaan, waa noloshoodii, waa naftoodii, waa caafimaadkoodii, waa hantidoodii, maaha iyagoo soo taagan in korkooda lagu heshiiyo.
Wasiirka Biyaha ee Somaliland oo isagu degaannadan ka soo jeedaana waa inuu arrinkan si qoto dheer uga fekeraa ee aanu go’aan keligiis ah qaadan waa haddii uu wax ka ogyahay arrintan adeeggii bulshada loogu wareejiyey shirkad macaashdoon ah. Waxaan kaloo wasiirka xaq loogu leeyahay meesha ay martay lacagtii loo qoondeeyey in biyaha Laascaanood lagu soo saaro ee ay bixisay Sanduuqa Dhaqaalaha Somaliland (SDF). Lacagtaasi isaga way ka horreysey, wuxuuse samayn karaa awoodna u leeyahay inuu ka daba tago meesha lacagtaasi martay, haddii la hayo iyo haddii kale. Waxa kaloo xaq loogu leeyahay inuu xogta lacagtaas la soo socodsiiyo dadka uu magacooda meesha ku joogo ee uu sheegto inuu metelo.